5 Baararka Best Iyada oo Music Live In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Baararka Best Iyada oo Music Live In Europe
Baararka leh music live arbushin meel kasta oo Europe, bixiya hab waqti meel noole halkaas oo cabitaan ah iyo gabayo xagga qulquli free dilaan. Haddii aad raadineyso inaad ku raaxeysato magaalada inta lagu jiro safarka tareenka, aan heysano qaar ka mid ah talooyin. Halkan waxaa noo top 5 baararka la music nool oo dhan Europe:
1. Music Live At Record Shop The, Paris, France
Record Shop ah waa mid ka mid ah baararka ugu fiican leh music nool France. Waxaa kaliya oo ka baxsan saldhiga metro ka Bastille. Ma aha oo kaliya waa fududahay si aad u hesho si ay u, laakiin waxa ay sidoo kale waa mid aad u raaxo. bar waa hore, waxayna ku leedahay masrax riwaayad dhab ah dhabarka dambe ee goobta muusikada, with the audience space hidden behind it.
Dadka deegaanka ku talinaynaa helitaanka Boos haddii booqashada baarka muusikada tooska ah ay ku taal adiga liiska hubinta safarka. Maxaa yeelay galo waa lacag la'aan, waxay noqon kartaa wax adag in la helo kursi ee bar ah. Marka aad ku sugan tahay, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato oo dhan noocyo of music noqon doonaa, gebi ahaanba live.
2. Music Live At Liquid, Luxembourg City, Luxembourg
bar xiiso leh music live dhawaan saaray Luxembourg on map ee cawayska Yurub. Liquid Cafe waxa uu ku yaalaa meesha muuqaal dabiici ah Grund ee Luxembourg. Haddii aad leedahay labadaba khamriga cabta oo is biirsaday iyo biir farsamo ku caashaqay in xisbiga safarka aad, this meesha si ay u tagaan waa.
Xitaa haddii aad ku riyaaqayaa aad a joogista gaaban ee Luxembourg, tahay in aad yeelan doontaa in ay qabsadaan shows music nool Liquid maalinta talaadada iyo khamiista. Haddii aad tahay nin Axaddii, Meeshan aad u waa.
Bonn in Tareenadu Amsterdam
Antwerp in Tareenadu Amsterdam
Munich in ay Tareenadu Amsterdam
3. Darbiyada ah, Rome, Italy
Ma qiyaasi kartaa helo a bar cusub ee maxalliga ah oo leh music live in ay booqdaan habeen walba inta aad fasaxa Yurub? Ku qor Darbiyada ah, mid ka mid ah ugu baararka halyeeyga Rome ee music live, la Bilash habeen walba.
bar ee goobta taariikhiga ah xaq qalbiga aagga ardayga San Lorenzo macnaheedu waa in aad u yeelan doontaa in la kulmo badan dadka deegaanka oo xiiso leh. Guud ahaan, waayo-aragnimo ah Roman dhab ah, Le Mura waa waajib-booqasho - xalay mid ka mid ah toddobaadka.
4. baqbaqaaq The, London, Boqortooyada Ingiriiska
Sida muuqata, Idris Elba ogyahay taas oo ah maaddooyinka in la isu geeyo galay bar fantastik ah leh music live. Uu bar raaxo, baqbaqaaq The, waxa uu ku yaalaa Aldwych iyo bixisaa ah waayo-aragnimo gaar ah.
Iyadoo band guriga dejinaysaa heerka qaab cajiib ah, aadan rabin inuu seego Mr. sets DJ joogto ah Elba ee. Taasi waa xaq - Jilaaga Hollywood ee inta badan ka qayb qaadataa in madadaalo ah by fulineynin nooc DJ, si raaxo isxigaan bar 'ah. cocktails dhalaalaya kalarka iftiimin niyadda sii in this live bar music shimbir Kaapelitalo kulaylaha.
5. Waterhole The, Amsterdam, Netherlands ayaa
Si aad u macaaneyd ayaa dalxiisayaasha iyo dadka deegaanka oo jecel this music bar live, Waterhole The qiyaastii in ka badan 25 sano. Mar kasta oo aad booqo Amsterdam, waxay yeelan doontaa wax si aad bixisaan, xitaa inta lagu jiro maalinta. On maalin qoraxdu, waxaa jira waxba ka khayr badan nasto on Terrace bannaan bar ee.
Haddii fududaato helitaanka waa heer sare ah oo ku saabsan liiska mudnaanta, Waterhole wuxuu qaadanayaa taajkii for bar ugu fiican ee la music nool Amsterdam. Sababta oo ah goobta dhexe, waxaa inta badan isugu. Sabab kale oo sababta dadkii badnaa ku jeclahay, tanu waa saacaddii faraxsan, taas oo uu socdaa ilaa 9 PM!
Booqashada mid ka mid ah Best Baararka Music Live waa habka ugu fiican si ay u bilaabaan ama joojiyaan Trip Europe tareenka, sidaas darteed Jartaan tikidhka Your Hadda!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Baararka Best la Music Live in Europe” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-bars-live-music-europe%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#drinkbeer #livemusic #liveshow #musicbar europetravel cawayska travelamsterdam travelfrance travelparis
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka ee Britain, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareen Travel Holland, Tareenka Safarka ee Hungary, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Switzerland, Tareen Travel The Netherlands, safarka Europe